I-Afrika Kulapho Impucuko kunye noSuku loKhenketho lweHlabathi lwaqala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » I-Afrika Kulapho Impucuko kunye noSuku loKhenketho lweHlabathi lwaqala
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Tourism • komzila Ngoku
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi kunye neBhodi yoKhenketho yase-Afrika bajoyine i-UNWTO namhlanje ukubhiyozela uSuku lwezoKhenketho lweHlabathi.
Nge-27 kaSeptemba, 2021 ibilusuku lokulibala iyantlukwano, imiceli mingeni kunye ne-COVID-19.
Ukhenketho lubandakanya wonke umntu kwaye luya kuphumelela ngcono kwaye lubukrelekrele xa uhlengahlengisa imeko ye-COVID-19.
USuku lweHlabathi lezoKhenketho lwasungulwa kwiseshoni yesithathu ye-UNWTO eTorremolinos, eSpain ngomhla we-17 kweyoMsintsi, 1979 ngumntu waseNigeria obizwa ngokuba ngu-IGNATIUS AMADUWA ATIGBI.
Ongasekhoyo uIgnatius Amaduwa Atigbi, ummi waseNigeria, nguye owaphakamisa umbono wokumakisha umhla wamashumi amabini anesixhenxe kwinyanga yoMsintsi njengoSuku loKhenketho lweHlabathi, yiyo loo nto abantu bembiza “Mnu. USuku loKhenketho lweHlabathi ”.
Namhlanje iBhodi yoKhenketho yase-Afrika ibhiyozele uSuku loKhenketho lweHlabathi kunye nayo yonke i-Afrika kunye nehlabathi. Kwakungumhla wokuzonwabisa, kunye nomhla wokulibala i-COVID-19
Isindululo sokumiliselwa koSuku lwezoKhenketho lweHlabathi savakaliswa nguMnu Ignatius Amaduwa Atigbi kwi-UNWTO ngonyaka we-1979. WayenguMlawuli-Jikelele wokuqala weNhlangano yoPhuhliso lwezoKhenketho eNigeria (NTDC), eyayibizwa ngokuba yi-Nigerian Tourism Association Association (NTA). uSihlalo weKhomishini yoKhenketho yase-Afrika (i-ATC).
Kwi-1980, i UMbutho weZizwe eziManyeneyo wezoKhenketho lubhiyozele uSuku lweHlabathi lezoKhenketho njengolugcinwa kwilizwe lonke nge-27 Septemba. Lo mhla wakhethwa njengaloo mhla ka-1970, kwamkelwa iMimiselo ye-UNWTO. Ukwamkelwa kwale Migaqo kuthathwa njengembalasane kukhenketho lwehlabathi. Injongo yolu suku kukwazisa ngendima yezokhenketho kuluntu lwamazwe aphesheya kunye nokubonisa ukuba luchaphazela njani ezentlalo, inkcubeko, ezopolitiko kunye nezoqoqosho kwihlabathi liphela.
U-Ignatius Amaduwa Atigbi ngo-1979 - uSuku loKhenketho lweHlabathi
Usweleke eneminyaka engama-68 nge-22 kaDisemba ngo-1998, wangcwatyelwa kwidolophu yakhe, eKoko, eDelta State.
Namhlanje kubhiyozelwe uSuku lweHlabathi lezoKhenketho e-Afrika iphela nakwihlabathi jikelele.
Kwabaninzi, olu ibilusuku lokuyeka amaxhala e-COVID-19 kunye nomonakalo owenziwe ngulo bhubhani kushishino lokhenketho nokhenketho kwihlabathi liphela.
Cuthbert Ncube, Usihlalo wezoKhenketho e-Afrika uxelele eTurboNews:
“Bendibhiyozela uSuku loKhenketho lweHlabathi phantsi kwesibhakabhaka sase-Afrika kwi-Mountain Kingdom yase-Eswatini. Ndikunye noMmeli weBhanki ye-ATB uMnu Sandile woKhenketho lwaseMzantsi Afrika,
Eswatini likhaya elitsha leBhodi yezoKhenketho yaseAfrika.
Usihlalo we-ATB onwabile esonwabela i-Eswatini ngoSuku lwezoKhenketho lweHlabathi
“Inxalenye enkulu ye-Afrika ngoku ivulelekile ukuba abatyeleli bamanye amazwe beze baphonononge iyantlukwano yethu ngokweNkcubeko, amathuba ethu amahle otyalo-mali njengoko sivuma ifuthe negalelo lezoKhenketho ekukhuleni nasekuzinziseni ekudaleni imisebenzi.
Sidinga ukubandakanywa ngokupheleleyo kwihlabathi jikelele ekulinganiseni umhlaba ongafakwanga kwaye ungafakwanga i-Afrika kunye neminikelo eyahlukeneyo idlale indima ebalulekileyo ekufakeni igalelo kwi-GDP yehlabathi.
Uluntu lwethu kufuneka luxhamle kwezinye zezinto eziphumayo ngenxa yokuba sibhiyozela olu suku i-Afrika kufuneka ijolise ekuphumezeni ngokubalulekileyo ukhenketho lwaseKhaya nolusekelwe kuluntu njengesiseko sokwenza kusebenze okuzinzileyo koqoqosho lwethu lwezoKhenketho.
Akonelanga ukuba ungaqhutywa xa ubhiyozela olu suku, kuba uninzi loluntu lwethu luhlala kwintlupheko. Kufuneka sisebenzisane ngendlela ebanzi ukuze sixabise ixabiso lokhenketho elixhamlisa abagcini belifa lethu. ”
eTurboNews ifumene iimpendulo ezivela kumazwe amaninzi ase-Afrika, kuquka i-Angola:
Ummeli we-ATB: Kuyanga Diamantino: WTD, waseAngola. Siyakholelwa ekubuyiseleni ngokupheleleyo, sikholelwa kwiinzame zikaRhulumente kunye nezo zaBucala zokwakha iNdawo yokuFikela eKhenketho eAfrika. Siyakholelwa kuphuhliso lwe-Afrika ngophuhliso lwezokhenketho oluzinzileyo
Ukhenketho lwasePuerto Rico ngoku luyachuma
Ishishini lokuhamba ekugqibeleni lidibana kwakhona kwi-WTM London
Izigulana zomhlaza wamabele zakwangoko zinganqanda ngoku...
Brand New Sports Car ngaphantsi $30,000
Ugonyo lwe-COVID lwaBantwana ngokuNgxamisekileyo Yithi ooGqirha be-ER
I-Seychelles Izilingo ngokuKhuthaza i-Cuisine ye-Goût de ...
Iindawo ekuchithelwa kuzo iisandals ngoku ziqhuba iiNtsuku ezingama-40 zoNikezo lwe...
I-Antiviral Entsha Yechiza i-Oselavir iQaliswa e-China
I-Genital Psoriasis: Iziphumo zeSifundo esitsha